5 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံး Picnic Spot | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပရှိအကောင်းဆုံး Picnic Spot
သင်သည်ဥရောပ၌စနေ၊ တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောအားလပ်ရက်အတွက်ခရီးထွက်သည်ဖြစ်စေ၊, သင်အမြဲတမ်းအနားယူရန်အချိန်ယူသင့်သည်. ပျော်ပွဲစားပွဲသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများနှင့်အမြင်များကိုအနားယူရန်နှင့်လေးစားရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏ဥရောပအားလပ်ရက်တွင်စတင်ရန်ကူညီရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲကျင်းပသည့်နေရာတစ်ခုတွင်လက်ဖြင့်ကောက်ယူထားပြီး၊. ပြန်ထိုင်ပါ, နှင့်မြင်ကွင်းကိုခံစားပါ!
1. Petrin Hill ၌ပျော်ပွဲစား, ပရာ့ဂ်
Petrin Hill ပန်းခြံရှိမြင်ကွင်းများနှင့်လေထုသည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှတစ်ခုအတွက်ဖြစ်စေသည်5ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲချင်းပြီး. ဖြစ်ချင်တော့, Lesser Town တွင်တည်ရှိသည်, Petrin Hill သည်စိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပရာ့ဂ်ရဲတိုက်ကိုအပေါ်စီးမှမြင်သည်. Petrin သည်မြို့တော်၏အလှပဆုံးရှုခင်းများကိုပေးသည်, ပြီးတော့မင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမျှော်စင်ကိုတက်နိုင်တယ် တကယ်သာယာလှပသောအမြင်များ မြို့သူမြို့သား, ရဲတိုက်, နှင့်တံတားများ.
Petrin Hill သည်နွေရာသီတွင်ဥရောပ၌ပျော်ပွဲစားထွက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်နွေရာသီ. အဆိုပါအရွက်လုံးဝကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ကျဆုံးခြင်းအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီတွင်သစ်ပင်များနှင့်မြေအားလုံးသည်စိမ်းလန်းစိုပြေလာမည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှသီးနှင့်အတူအချို့သော scones ဖမ်းပြီး Artic Bakehouse သင်တို့ရှိသမျှသည်ပရာ့ဂ်၌အံ့ဖွယ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်.
Petrin Hill ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Petrin Hill သည်မြို့ဟောင်းနှင့်မြို့လယ်ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်. သငျသညျ funicular အားဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်, လမ်းရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကား, ခရီးသွား all ည့်အားလုံးလိုပဲ. ဒါပေမဲ့, သင် Petrin Hill ကိုခြေလျင်လျှောက်နိုင်ပါတယ်, ချားလ်စ်တံတားကို Mala Strana နှင့် Lennon နံရံအထိဖြတ်ကျော်လိုက်ပါ. ရာသီဥတုသာယာပြီးနေ ၀ င်ရန်ပျော်ပွဲစားသည်မြို့ရှိဤအိပ်မက်ဆိုးမက်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါကတစ်နာရီခန့်ကြာမည်။.
2. Saxon ဆွစ်ဇာလန်ရှိမြစ်အားဖြင့် Picnic, ဂျာမနီ
မြစ်ကြီးများ, ရှေ့နှင်းဖုံးထိပ်များ, နှင့်သင်တို့ပတ်လည်စိမ်းလန်းသောမြက်ခင်းပြင်, Saxon ဆွစ်ဇာလန် အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်အံ့မခန်းဖွယ်ပရဒိသုဖြစ်သည်. ပျင်းရိတဲ့နံနက်ခင်းဒါမှမဟုတ်အဆုံးမှာ ရှည်လျားသောခြေလျင်, Bastei တံတားသည်အလွန်ပျော်စရာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
သင်စွန့်စားမှုနှင့်တောင်တက်ဝါသနာအိုးသို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့အနားယူတာကိုသင်တကယ်နှစ်သက်မှာပါ. သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျလှပသောလူနေမှုနှင့်အနားယူလိုလျှင်, Saxon ဆွစ်ဇာလန်ရှိမြစ်နားကပျော်ပွဲစားပွဲသည်သင်၏ဥရောပအားလပ်ရက်အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်.
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Saxon သို့ရောက်ရန်?
Saxon ဆွစ်ဇာလန်သာဖြစ်ပါတယ် 30 Dresden မှမိနစ်ရထားခရီးသွားလာ. ဒါကြောင့်, တစ်ခု Eierschecke ထုပ်ပိုး, ကော်ဖီ, သီး, ဒေသခံစျေးကွက်မှသစ်သီးများနှင့်သင်တို့အားလုံးသည်ဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲတော်တစ်ခုတွင်အချိန်ကုန်ခံရန်သတ်မှတ်ထားကြသည်.
3. Lago Di Braies ရှိရေကန်ဘေးကပျော်ပွဲစား, အီတလီ
အိုင်၌အပြာရောင်ယူနန်ပြည်နယ်၏ရေနှင့်တောင်ထိပ်များကိုထင်ဟပ်စေသည်, အီတလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်း Tyrol ရှိ Lake di Braies ၏မြင်ကွင်းများသည်သင်၏ပျော်ပွဲစားကိုလှပသောအမှတ်တရများဖြင့်အရောင်တင်ပေးလိမ့်မည်. အီတလီအချက်အပြုတ်ကောင်းကင်ဘုံသည်, နှင့်ပေါင်းခဲ့သည် အံ့မခန်းရေကန်များ နှင့်တောင်များ, ဒီကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်များစွာအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်တကယ်မလိုအပ်ပါဘူး5ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲချင်းပြီး.
သင် Dolomites အတွက်တောင်တက်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်လျှင်, Braie ၏နေ့ခင်းဘက်ချင်းသွားရသည့်လမ်းကြောင်းသည်အတော်လေးလွယ်ကူသည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျသဘောသဘာဝအတွက်အံ့သြဖွယ်နေ့ကိုချွတ်ပြီးအောင်, သင့်ရဲ့ Panini သို့မဟုတ်ပီဇာမှကိုက်တာနဲ့ Dolomites ရှိအကြီးဆုံးသဘာဝရေကန်၏ရှုခင်းများကိုသဘောကျခြင်း.
Lago Di Braie သို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ရောက်နိုင်မည်နည်း?
Lago di Braies သည် Bolzano မှမီးရထားခရီးသွားခြင်းဖြစ်သည်, အနီးဆုံးမြို့. ရထားနဲ့တစ်နာရီလောက်ကြာတယ်, သို့မဟုတ်သင်အနီးအနားမှာအံ့သြစရာနေရာထိုင်ခင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
4. Margret ကျွန်းရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင်ပျော်ပွဲစား, ဘူဒါပက်
ဒန်ညုမြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, Buda နှင့်ပိုးမွှားအကြား, မာဂရက်ကျွန်းသည်ဘူဒါပတ်စ်၌နွေ ဦး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ကျွန်းက 2.5 ကီလိုမီတာ, နေရောင်ထဲမှာပျော်စရာအတွက်ဒေသခံများကြားတွင်အကြိုက်ဆုံး. ဖြည့်စွက်ကာ, ဒေသခံစျေးကွက်အနီးအနားမှာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပျော်ပွဲစားအားကစားကိုမြို့မှသယ်ဆောင်ရန်မလိုပါ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်ဒေသန္တရခဲဖွယ်စားဖွယ်များအားလုံးကိုဈေးတွင်ရယူပြီးကျွန်းသို့ ဦး တည်သည်.
လမ်းရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်, Margaret ကျွန်းသည်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်. Insider ရဲ့အစွန်အဖျား: Budapest ကဒ်သည်သင့်အားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အထူးကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဆွဲဆောင်မှု.
5. Champs De Mars Paris တွင်ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း
ပါရီတွင် Seine တစ်လျှောက်လှပသောဥယျာဉ်များနှင့်ပျော်စရာနေရာများစွာရှိသည်. ပါရီမြို့၏အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲတော်သည်ထင်ရှားသော Champs de Mars အာကာသတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်သည်.
၎င်းသည်သတ္တမမြောက်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် Eiffel Tower ကြားရှိကြီးမားသောအစိမ်းရောင်နေရာဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ပါရီရှိအပန်းဖြေစခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးနေဝင်ချိန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ရှုခင်းအပြင်, ဒါကြောင့်လည်းတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ပါရီရှိ Eiffel Tower တွင်အကောင်းဆုံးရှုထောင့်များ.
နွေရာသီတွင်ပါရီမြို့ရှိမိသားစုများသည်နေကိုစုပ်ယူရန်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်များ၏ကျဆုံးခြင်းရှုခင်းကိုခံစားရန်ရောက်ရှိလာကြသည်. ၎င်းသည်အလွန်ငြိမ်းချမ်းပြီး Eiffel Tower ညအလင်းရောင်များကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်, လတ်ဆတ်တဲ့ baguette ထုပ်ပိုးရန်သေချာစေပါ, camembert, လတ်ဆတ်တဲ့အသီး, ဝိုင်, နှင့်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲသို့ ဦး တည်သွားပါ.
De Mars ဥယျာဉ်သို့ရောက်ရန်နည်းလမ်း?
သင်မက်ထရိုသို့မဟုတ် RER ရထားစီးနိုင်ပါတယ်. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Champ de Mars-Tour Eiffel ဘူတာတွင်ဆင်းပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာတိုင်းကိုလုံးလုံးမြင်တွေ့ခံစားချင်သောကြောင့်ခရီးသွားခြင်းသည်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိုင်သည်. ဥရောပ၌ထူးခြား။ မမေ့နိုင်စရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်မြင်ကွင်းများရှိသည်. သင်အမြဲတတ်နိုင်သမျှကြည့်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နေစဉ်, တစ်ခါတစ်ရံသင်ကလွယ်ကူစွာယူရန်လိုအပ်သည်. ဒေသဆိုင်ရာခဲဖွယ်စားဖွယ်များနှင့်ပျော်ပွဲစားစားသောက်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်နှင့်အစားအစာကိုလေ့လာရန်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ခြေလှမ်းမလှမ်းဘဲ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့စာရင်းထဲရှိလှပသောပျော်စရာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်နေရာသို့သွားရန်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ကိုသင်ရှာတွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအစက်အပြောက် ၅ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ရန်သင်လိုလားသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, သငျတို့သက de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများမှ / fr အဆိုပါ / zh-CN ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ် / လို့ရပါတယ်.